Krita 4.4.7 yauya chete kugadzirisa zvipembenene zvinomwe | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi miviri yapfuura takadzokorora kubva pakuburitswa v4.4.5 yeiyi software inogadzirwa uye uye yevanopopota. Musi iwoyo takataurawo nezve v4.4.4, yaive v4.4.3 yaive yakaiswa kuEpic Store. Ini handizive kana zvichazoita seizvi kubva ikozvino, asi chokwadi ndechekuti nhoroondo yakazvidzokorora pachayo: 4.4.6 yakaiswa muchitoro cheEpic, uye izvo zvavakaburitsa nhasi Krita 4.4.7.
Kana mumwe munhu ari kutarisira chimwe chinhu chine shanduko zhinji, uku hakusi kwavo kusunungurwa. KDE inoti Krita 4.4.7 iri kusunungurwa kunouya chaizvo kugadzirisa bugs, Vanomwe. Iko hakuna kuwanda, asi idzi mhando dzekuvandudzwa dzinongoerekana dzave dzakakosha kana imwe yechiputi yavanogadzirisa iri kuita kuti hupenyu hwedu husakwanise.
Chii chitsva muKrita 4.4.7
Tsaona kana uchibuda nedzimwe shanduro dzeQt nePyQt.
Kufambisa kwesarudzo neiyo magnetic kusarudza chishandiso.
Magnetic sarudzo yekushandisa inorovera painobvisa node.
Chirevo kana uchichinja iyo yemuvara nzvimbo kubva kuPython.
Kupunzika paunenge uchivhara gadhi remask mask.
Dhonza uye udonhedze matanda akavezwa pakati pemifananidzo.
Kupunzika kana uchichengetedza mufananidzo pamwe nekucheka kwakagoneswa.
Krita 4.4.7 ikozvino iripo kune ese masisitimu akatsigirwa kubva kune yako website yepamutemo. Vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi AppImage kubva ipapo, uye repository yeUbuntu inowanikwawo (https://launchpad.net/~kritalime/+archive/ubuntu/ppa). Tinofanira munguva pfupi inotevera kugona kuisa yako Flatpak vhezheni, iyo parizvino inoramba iri muna 4.4.3, kana yayo Snap vhezheni, iyo iri muna 4.4.5. Kana vari vashandisi veWindows, vanogona kudhawunirodha iyo inogona kuiswa kana iyo 64-bit "inotakurika" vhezheni.
La inotevera vhezheni inofanira kusvika mukati memwedzi miviri, asi isu hatigone kuve nechokwadi kana ichave Krita 4.4.8 kana 4.4.9, zvinoenderana nezvavanoita neEpic chitoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Krita 4.4.7 yauya chete kugadzirisa zvipembenene zvinomwe
Chimbo chemahara chakaita saKrita hachi svike pakukoshesa muchikuva chakanangana nemitambo uye chisina hushamwari kuLinux: yakabvisa Rocket League uye haiteerere vashandisi vayo.